Jon Stewart dia mampiroborobo ny fahitalavitra Apple vaovao + fampisehoana maneso ny hazakazaka an'arivony tapitrisa | Avy amin'ny mac aho
Jon Stewart dia mampiroborobo ny seho vaovao ho an'ny Apple TV + maneso ny hazakazaka an'arivony tapitrisa
Taorian'ny nandaozany ny tontolon'ny fahitalavitra tamin'ny 2015 ary nanenjika ny lalàna, ny mpanolotra Nanambara i Jon Stewart tamin'ny faran'ny taona lasa fa nanana ny fikasana aho miverena amin'ny fahitalavitra, ny maha Apple TV + ny sehatra voafidy amin'ny fiverenany amin'ny tontolon'ny fahitalavitra miaraka amina programa misy ankehitriny.
Ny fantatsika dia ny fizarana tsirairay hiatrika lohahevitra tokana ary izao dia izao. Raha ny teôria dia toa manondro ny zava-drehetra fa ny olana misy ankehitriny dia horaisina amina andiany iray ary henjana kosa, na izany aza, amin'ny horonantsary fampiroboroboana ny fiverenany amin'ny Apple TV + mba hanondroana ny mifanohitra amin'izany.
Miala tsiny amin'ny fanombohana nesorina !!! Twitter aho ratsy.
Ankafizo ity dingana kely ity ho an'ny lehilahy! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ
- Jon Stewart (@jonstewart) Jolay 20, 2021
Jon Stewart dia nandefa tao amin'ny kaonty Twitter -ny ny horonantsary iray mampiroborobo ny seho nataony Ny olana amin'i Jon Stewart ao amin'izany mampihomehy amin'ny hazakazaka an'arivony tapitrisa. Amin'ity horonantsary maharitra 3 minitra ity, Stewart dia manesoeso ireo mpanapitrisa teknolojia tia habaka: Jeff Bezos, Elon Musk ary Richard Branson.
Amin'ny andraikitry ny Elon Musk dia ilay mpilalao sarimihetsika Adam Pally, milalao Jeff Bezos no ahitantsika an'i Jason Alexander ary amin'ny anjara asan'ny Richard Branson nahita mop (eny, mop.). Amin'ny asan'i Mark Zuckerberg dia tsy nahita saka nania izahay.
Na dia tsy voafehinao loatra aza ny anglisy, dia i Jon Stewart no niandraikitra ny fanomezana fisehoana an-tsary ampy ampy hahafantarana tsara izay heveriny fa hazakazaka an'arivony tapitrisa an'arivony avy amin'ireo orinasan-teknolojia lehibe, ka manasa anao aho hijery ny horonantsary feno.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Jon Stewart dia mampiroborobo ny seho vaovao ho an'ny Apple TV + maneso ny hazakazaka an'arivony tapitrisa
Araka ny voalazan'i Kuo, ny MacBook Air misy efijery Mini-LED 13-inch dia eo afovoan'ny 2022